Blogs from the Trail :: The Great Himalaya Trail - Climate Smart Celebrity Trek
Sixtieth Day of the Climate Smart Trek
March 14,2012 - Siklis
This is sixtieth day of our trek on the Great Himalaya Trail. The past two months seem both long and short. On the one hand, looking back now at our first days when we started walking in the eastern border feels like it was many years ago........ read more
हिउले बाटो अलि लजालु कन्चनजंधा।।।
अवको हाम्रो यात्रा मानवबस्ति रहित क्षेत्रहुदै अधि बढदै छ । यो बेसिजन भएकोले माथिल्लो भेगका बस्ति सवै तल झरेका छन् । तर हाम्रो यात्रा भने केहि माथि जानु छ ।
आप्पा र अन्य शेर्पाहरुलाई तल भन्दा माथि चिसो क्षेत्र आएपछि यात्रा सहज हुने रैछ ....... read more
Salpa Fedi to Sanam through Gurase - Day 21
बिहान उठने प्रयास अज पनि असफल भयो । बिहान उठने बित्तिकै हिडने बेला भैहाल्यो । रोटि अण्डा खाएर यात्रा शुरु गरियो । आज यात्रामा एक युवक भेटेयो ...... read more
Majuwa Dada to Salpa Fedi through Gothe Bazaar - Day 20
February 3, 2012 रोटि र अण्डा खाएर हाम्रँे २० औ दिनको यात्रा अधि बढछ । आज हामि प्रदिप सर सग छुटिएम । प्रदिप सर खादवारिनै फर्कने हुनु भयो । हाम्रो टोलि अरुणको बगर छोडेर ...... read more
Khaadbari to Chiyabesi to Majuwa Dada - Day 19
आज बाट हाम्रो दोस्रो चरणको यात्रा शुरु हुदै छ । यो यात्रामा हामी तिर, भिर र शिर सम्मको यात्रा गर्ने छौ । खादवारि बाट केहि आधा घण्टा तल ओरालो लाग्ने ..... read more
Khaadbari - Day 18
आज धैरै दिन पछि इन्टरनेटको खुलेर प्रयोग गर्न पाइयो त्यो पनि एक छिन हामी बसेको होटेलमा वाई फाइ रै छ । तर बिहानको खाजा खाएर ..... read more
123 Next Read More